အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘော့စတွန်မြို့အနီး နေရာပေါင်းများစွာ၌ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲ၊ တစ်ဥ? - Yangon Media Group
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘော့စတွန်မြို့အနီး နေရာပေါင်းများစွာ၌ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲ၊ တစ်ဥ?
အန်ဒိုဗာ(မက်ဆာချူးဆက်)၊ စက်တင်ဘာ ၁၄
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘော့စတွန်မြို့အနီး ဒေသသုံးခုရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ ဒါဇင်နှင့်ချီသော နေရာမှ ပေါက်ကွဲခဲ့သောကြောင့် အနည်းဆုံး တစ်ဦးသေဆုံးပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာများရရှိသွားခဲ့ပြီး အနီးအနားမှ လူရာပေါင်းများစွာ တို့အား နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရသည်ဟု ဒေသ ခံအရာရှိများက စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။
ဓာတ်ငွေ့လိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နေအိမ်ပေါင်းများ စွာ ပျက်စီးခဲ့ရပြီး မီးလောင်ကျွမ်းနေမှုအား မီးသတ်သမား များစွာတို့က တစ်နာရီကျော်ကြာ ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြရသည်။ မီး မကူးစက်နိုင်ရန် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့် လျှပ်စစ်မီးများ အားလည်း အလျင်အမြန် ပိတ်လိုက်ကြရသည်။ Columbia Gas of Messachusetts ကုမ္ပဏီပိုင် ပိုက် လိုင်းတစ်ခုမှ စတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ရသည်ဟု အင်ဒိုဗာ မြို့ မီးသတ်အရာရှိ မိုက်ကယ်မင်းစ်ဖီးက သတင်းထောက်များ ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
ကုမ္ပဏီဘက်ကမူ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအား အဆင့် မြှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေစဉ် မတော်တဆ ပေါက်ကွဲခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း မည်သည့်နေရာမှ စတင် ဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ ဖြစ်ပွားရခြင်း အသေးစိတ်အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ် ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကင်စတန်မင်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားသောနေရာမှာ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် မြို့တော်မှ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၄ဝ ဝေးသော လော့ရင့်စ်မြို့အနီးတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိ ရသည်။